ရိုးသားတဲ့ မွနျမာပွညျက အငှါးယာဉျမောငျးရဲ့ စတေနာအကြိုးပေး - ThutaStar
October 3, 2019 Thuta Star ပြည်တွင်း 0
ဖစျေ့ဘှတျချပျေါမှာ အကောငျ့ပိုငျရှငျ Justin Htet Paing တငျပွမြှ ဝထေားတဲ့ပို့ဈတဈခုကို တှရှေိ့ခဲ့ရတာဖွဈပါတယျ။ တဈဦးမတ်ေတာ တဈဦးစတေနာ ဆိုတဲ့ မွနျမာလူမြိုးတို့ရဲ့ စိတျဓာတျမှနျလေးကို ဖျောပွပေးခဲ့ပွတဲ့ ကနြေပျပီတိစရာ ဖွဈရပျလေးပါပဲ။ ရိုးသားတဲ့ မွနျမာပွညျက အငှါးယာဉျမောငျးရဲ့ စတေနာအကြိုးပေးအကွောငျးကို တငျဆကျပေးပါရစေ ApannPyay ခဈြပရိသတျကွီးတို့ရေ။
ဖစျေ့ဘှတျချအကောငျ့ပိုငျရှငျ Justin Htet Paing တငျပွထားခဲ့တဲ့ ဖွဈစဉျက ဒီလိုပါ။
သူဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ စကျတငျဘာလ ၃၀ ရကျနကေ့ Myanmar Plaza ကို တက်ကစီငှားရမျးစီးနငျးသှားခဲ့ပွီးနောကျ အဲ့ဒီတက်ကစီ ကားပျေါမှာ သူ့ရဲ့ တနျဖိုးကွီးဖုနျးကို မကေ့နျြခဲ့တာ ဖွဈကွောငျး သိရပါတယျ။
သူ သတိရလာခြိနျ သူ့ရဲ့ဖုနျးကိုပွနျချေါပွီး ဖုနျးဆကျတဲ့အခါမှာတော့ အငှါးယာဉျမောငျး ကိုကြျောသူရ ဆိုသူဟာ Myanmar Plaza အထိ အရောကျပွနျလာခဲ့ပွီး ရိုးသားစှာနဲ့ ခရီးသညျ မကေ့နျြခဲ့တဲ့ ဖုနျးကို ပွနျလညျပေးအပျခဲ့တယျလို့ သိရပါတယျ။
စိတျနှလူံးထားလှတဲ့ ကိုကြျောသူရဟာ BB-2841 Probox ဆိုတဲ့ အငှါးယာဉျကိုမောငျးနတေယျလို့ သိရပွီး ရှပွေညျသာမှာနထေိုငျနသေူဖွဈကွောငျး ဆိုပါတယျ။
သူ့ကို ကြေးဇူးဆပျတဲ့အနနေဲ့ ငှတေဈသိနျးပေးတာမယူတဲ့အတှကျ ကို Justin က အတငျးပေးလိုကျတဲ့အကွောငျး၊ ကိုကြျောသူရရဲ့ရိုးသားတဲ့စိတျဓာတျကို လေးစားစှာနဲ့ အသိအမှတျပွုရကွောငျးကိုပါ မြှဝရေေးသားထားပါတယျ။
ရှားပါးတဲ့ စိတျဓာတျနဲ့ ရိုးသားမှုကို ပိုငျဆိုငျထားပွီး စိတျနှလူံးထားလှပတဲ့ ကိုကြျောသူရကို ဖစျေ့ဘှတျချအသုံးပွုသူတှကေလညျး ခြီးကြူးပွောဆိုနကွေတာတှကေိုလညျး အခုလိုတှေ့ ခဲ့ရပါတယျ။
“​လေးစားလိုကျ​တာ သူ့လိုလူ​တှေ အမြားကွီးရှိရငျ​​ကောငျးမယျ​
ရခငျြ​လို့. ရိုကျ​လု ဓားနဲ့ထိုးလုလု​နကွေတာ ရိုးသားစှာပွနျ​​ပေးတာ ခြီးကွူးပါတယျ​
၂ ယောကျလုံးကိုလေးစားပါတယျ ရိုးသားသူရော ရိုးသားမှူကို ခြီးမွောကျတဲ့သူရော စတေနာအကြိုးပေးပါစေ
အ​ကို​ရအေခုဖုနျးကိုအမွဲကိုငျ​ထားပါရနျ​ကုနျ​​ရောကျ​ရငျ​အကိုကားကိုစီခငျြ​လို့ ​ရှထေကျ​ရှားတယျ​ ​စတေနာအကြိုး​ပေးပါ​စဗြော
ရိုးသားတဲ့ အငှါးယာဉျမောငျးအား လေးစားမိပါတယျ
ဒီခေါတျကွီးမှာလေးစားလောကျပါရဲ့ဗြာရှားသှားပွီ ပွနျ​​ပေးတဲ့သူကရိုးသားသူ ​ငှေ​ပေးတဲ့လူက​ကြေးဇူးသိတကျ​တဲ့လူ​ပေါ့
ယာဉျမောငျးရော ဖုနျးပိုငျရှငျရောကို နှဈယောကျလုံးကို လေးစား ဂုဏျယူပါတယျ ဗြာ တဈဦးမတ်ေတာ တဈဦးစတေနာပေါ့ဗြာ အခြို့သော ဖုနျးပိုငျရှငျတှကေ သူတို့ပစ်စညျးတာ ပွနျသှားပေးရတယျ သှားပို့ပေးတဲ့ ကားခလောကျတောငျ မပေးခငျြကွဘူး ယခု ဖုနျးပိုငျရှငျ အကိုကိုယျတော့ တကယျလေးစားပါတယျ ဗြာ”
အစရှိတဲ့ အားပေးဂုဏျပွုမှု ကှနျမနျ့ရေးသားမှုဝဆောနခေဲ့ပွီး တဈဦးမတ်ေတာ တဈဦးစတေနာအဖွဈ ပွနျ​​ပေးတဲ့သူကရိုးသားသူ ​ငှေ​ပေးတဲ့လူက​ကြေးဇူးသိတကျ​တဲ့လူပဲပေါ့လေ လို့ နှဈဦးစလုံးအပျေါ ခြီးမှမျးဂုဏျယူနခေဲ့ကွတာဟာ မွငျတှရေ့သူတျိုငျးအတှကျ ကွညျနူးနှဈသိမျ့စရာ ဖွဈစခေဲ့ရပါတယျ။
ကိုကြျောသူရ လို လူမြိုးရဲ့ အငှါးယာဉျကိုမှ စိတျလုံခွုံစှာစီးပွီး ခရီးသှားလာခငျြပါတယျဆိုသူတှအေတှကျလညျး သူရဲ့ ဖုနျးနံပါတျလေးကိုပါ ဖျောပွပေးပါရစေ။
EFIL-ApannPyay Source Justin Htet Paing FB
ရိုးသားတဲ့ မြန်မာပြည်က အငှါးယာဉ်မောင်းရဲ့ စေတနာအကျိုးပေး
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပေါ်မှာ အကောင့်ပိုင်ရှင် Justin Htet Paing တင်ပြမျှ ဝေထားတဲ့ပို့စ်တစ်ခုကို တွေ့ရှိခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးမေတ္တာ တစ်ဦးစေတနာ ဆိုတဲ့ မြန်မာလူမျိုးတို့ရဲ့ စိတ်ဓာတ်မွန်လေးကို ဖော်ပြပေးခဲ့ပြတဲ့ ကျေနပ်ပီတိစရာ ဖြစ်ရပ်လေးပါပဲ။ ရိုးသားတဲ့ မြန်မာပြည်က အငှါးယာဉ်မောင်းရဲ့ စေတနာအကျိုးပေးအကြောင်းကို တင်ဆက်ပေးပါရစေ ApannPyay ချစ်ပရိသတ်ကြီးတို့ရေ။
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အကောင့်ပိုင်ရှင် Justin Htet Paing တင်ပြထားခဲ့တဲ့ ဖြစ်စဉ်က ဒီလိုပါ။
သူဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့က Myanmar Plaza ကို တက္ကစီငှားရမ်းစီးနင်းသွားခဲ့ပြီးနောက် အဲ့ဒီတက္ကစီ ကားပေါ်မှာ သူ့ရဲ့ တန်ဖိုးကြီးဖုန်းကို မေ့ကျန်ခဲ့တာ ဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။
သူ သတိရလာချိန် သူ့ရဲ့ဖုန်းကိုပြန်ခေါ်ပြီး ဖုန်းဆက်တဲ့အခါမှာတော့ အငှါးယာဉ်မောင်း ကိုကျော်သူရ ဆိုသူဟာ Myanmar Plaza အထိ အရောက်ပြန်လာခဲ့ပြီး ရိုးသားစွာနဲ့ ခရီးသည် မေ့ကျန်ခဲ့တဲ့ ဖုန်းကို ပြန်လည်ပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
စိတ်နှလူံးထားလှတဲ့ ကိုကျော်သူရဟာ BB-2841 Probox ဆိုတဲ့ အငှါးယာဉ်ကိုမောင်းနေတယ်လို့ သိရပြီး ရွှေပြည်သာမှာနေထိုင်နေသူဖြစ်ကြောင်း ဆိုပါတယ်။
သူ့ကို ကျေးဇူးဆပ်တဲ့အနေနဲ့ ငွေတစ်သိန်းပေးတာမယူတဲ့အတွက် ကို Justin က အတင်းပေးလိုက်တဲ့အကြောင်း၊ ကိုကျော်သူရရဲ့ရိုးသားတဲ့စိတ်ဓာတ်ကို လေးစားစွာနဲ့ အသိအမှတ်ပြုရကြောင်းကိုပါ မျှဝေရေးသားထားပါတယ်။
ရှားပါးတဲ့ စိတ်ဓာတ်နဲ့ ရိုးသားမှုကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး စိတ်နှလူံးထားလှပတဲ့ ကိုကျော်သူရကို ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အသုံးပြုသူတွေကလည်း ချီးကျူးပြောဆိုနေကြတာတွေကိုလည်း အခုလိုတွေ့ ခဲ့ရပါတယ်။
“​လေးစားလိုက်​တာ သူ့လိုလူ​တွေ အများကြီးရှိရင်​​ကောင်းမယ်​
ရချင်​လို့. ရိုက်​လု ဓားနဲ့ထိုးလုလု​နေကြတာ ရိုးသားစွာပြန်​​ပေးတာ ချီးကြူးပါတယ်​
၂ ယောက်လုံးကိုလေးစားပါတယ် ရိုးသားသူရော ရိုးသားမှူကို ချီးမြောက်တဲ့သူရော စေတနာအကျိုးပေးပါစေ
အ​ကို​ရေအခုဖုန်းကိုအမြဲကိုင်​ထားပါရန်​ကုန်​​ရောက်​ရင်​အကိုကားကိုစီချင်​လို့ ​ရွှေထက်​ရှားတယ်​ ​စေတနာအကျိုး​ပေးပါ​စေဗျာ
ရိုးသားတဲ့ အငှါးယာဉ်မောင်းအား လေးစားမိပါတယ်
ဒီခေါတ်ကြီးမှာလေးစားလောက်ပါရဲ့ဗျာရှားသွားပြီ ပြန်​​ပေးတဲ့သူကရိုးသားသူ ​ငွေ​ပေးတဲ့လူက​ကျေးဇူးသိတက်​တဲ့လူ​ပေါ့
ယာဉ်မောင်းရော ဖုန်းပိုင်ရှင်ရောကို နှစ်ယောက်လုံးကို လေးစား ဂုဏ်ယူပါတယ် ဗျာ တစ်ဦးမေတ္တာ တစ်ဦးစေတနာပေါ့ဗျာ အချို့သော ဖုန်းပိုင်ရှင်တွေက သူတို့ပစ္စည်းတာ ပြန်သွားပေးရတယ် သွားပို့ပေးတဲ့ ကားခလောက်တောင် မပေးချင်ကြဘူး ယခု ဖုန်းပိုင်ရှင် အကိုကိုယ်တော့ တကယ်လေးစားပါတယ် ဗျာ”
အစရှိတဲ့ အားပေးဂုဏ်ပြုမှု ကွန်မန့်ရေးသားမှုဝေဆာနေခဲ့ပြီး တစ်ဦးမေတ္တာ တစ်ဦးစေတနာအဖြစ် ပြန်​​ပေးတဲ့သူကရိုးသားသူ ​ငွေ​ပေးတဲ့လူက​ကျေးဇူးသိတက်​တဲ့လူပဲပေါ့လေ လို့ နှစ်ဦးစလုံးအပေါ် ချီးမွမ်းဂုဏ်ယူနေခဲ့ကြတာဟာ မြင်တွေ့ရသူတိုင်းအတွက် ကြည်နူးနှစ်သိမ့်စရာ ဖြစ်စေခဲ့ရပါတယ်။
ကိုကျော်သူရ လို လူမျိုးရဲ့ အငှါးယာဉ်ကိုမှ စိတ်လုံခြုံစွာစီးပြီး ခရီးသွားလာချင်ပါတယ်ဆိုသူတွေအတွက်လည်း သူရဲ့ ဖုန်းနံပါတ်လေးကိုပါ ဖော်ပြပေးပါရစေ။